China Ehv Cable kwemveliso kunye Factory | Ilanga
Esisangqa iNtloko Bolt
Hex iNtloko Bolt
Isiseko seCalcium grease
Intambo yeRubber yeSilicone
Intambo yeVtage ephezulu
Intambo yamandla 32
Ixesha eliQinisekayo lokuVavanya
Ucingo olunamandla ombane
Intambo yombane ephezulu luhlobo lwentambo yombane, ebhekisa kwintambo yombane esetyenziselwa ukuhambisa phakathi kwe-10kv-35kv (1kv = 1000v), kwaye isetyenziswa ikakhulu kwindlela ephambili yokuhambisa amandla. Imigangatho yokuphunyezwa kwemveliso yeentambo zombane ophezulu zi-gb / t 12706.2-2008 kunye ne-gb / t 12706.3-2008
Iindidi zeentambo zombane ophezulu
Ezona ntlobo ziphambili zeentambo zombane ophezulu ziintambo ze-yjv, intambo ye-vv, intambo ye-yjlv kunye nentambo ye-vlv.
Intambo ye-yjv igama elipheleleyo i-XLPE i-cable ye-PVC ekhutshwe ngombane (isiseko sobhedu)
Igama elipheleleyo le-vv cable yi-PVC i-insulated and sheathed power cable (core core)
Intambo ye-yjlv igama elipheleleyo le-XLPE i-cable ye-aluminium yentsimbi ye-aluminium engundoqo
Intambo ye-VLV igama elipheleleyo le-PVC efakwe kwi-cable ye-aluminium engundoqo yamandla
Ngenxa yokuqhuba kakuhle kombane kwabaqhubi bezobhedu, iiprojekthi ezininzi nangaphezulu zisebenzisa amandla ombane njengeyona ndlela iphambili yenkqubo yokuhambisa umbane, ngelixa iintambo zombane zealuminium zisetyenziswa kancinci, ngakumbi kwinkqubo yamandla ombane ophezulu, khetha ubhedu Iintambo ezingakumbi zikhona.
Ubume beentambo ezinamandla ombane
Izinto zentambo enevolthi ephezulu ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle zibandakanya: umqhubi, ubushushu, isheath yangaphakathi, ifiller (isikrweqe), kunye nokugquma kwangaphandle. Ewe iintambo zombane ezisebenzisa amandla aphezulu zisetyenziselwa ukungcwaba phantsi komhlaba, ezinokumelana nokuxinana okuphezulu komhlaba kunye nokuthintela ukonakala kweminye imikhosi yangaphandle.
Ukucaciswa okuqhelekileyo kunye nokusetyenziswa
I-na-yjv, i-nb-yjv, i-XLPE efakwe i-PVC egudileyo (a) iintambo zombane ezinganyangekiyo emlilweni zinokufakwa ngaphakathi ezindlini, kwiitonela kunye nemibhobho efuna ukumelana nomlilo.
I-na-yjv22, i-nb-yjv22, i-XLPE i-inshu yentsimbi exhobileyo i-PVC i-sheathed (b) intambo yamandla enganyangekiyo umlilo ilungele ukubeka umhlaba xa kufuneka umlilo, awukulungelanga ukubeka imibhobho.
I-na-vv, i-nb-vv, i-PVC efakwe kwi-PVC efakwe i-a (b) intambo yamandla enganyangekiyo emlilweni inokubekwa ngaphakathi, kwiitonela kunye nemibhobho efuna ukumelana nomlilo.
I-na-vv22, i-nb-vv22, i-PVC i-inshurensi yentsimbi exutywe ngohlobo lwe-PVC (a) iintambo zombane ezingatshiyo zilungele ukubekwa emhlabeni xa kufuneka umlilo, kodwa azilungelanga ukubeka imibhobho.
I-wdna-yjy23, i-wdnb-yjy23, i-polyethylene enxibelelene ne-inshorensi yentsimbi ene-armored polyolefin i-sheathed (b) intambo yombane engatshisiyo engenawo umsi ilungele ukubekwa emhlabeni xa i-halogen-free, umsi ophantsi kunye nomlilo ukuxhathisa kuyafuneka, akulunganga Ukubeka imibhobho.
za-yjv, za-yjlv, zb-yjv, zb-yjlv, zc-yjv, zc-yjlv, i-polyethylene enqamlezileyo enqamlezileyo i-PVC ifakelwe i-b (c, c) intambo yamandla e-flame-retardant yamandla inokufakwa ngokuchaseneyo ngokuchaseneyo ngaphakathi, iitonela kunye nemibhobho eneemfuno.
za-yjv22, za-yjlv22, zb-yjv22, zb-yjlv22, zc-yjv22, zc-yjlv22, umnqamlezo odityanisiweyo we-polyethylene yentsimbi yentsimbi exhobileyo i-PVC i-sheat shehed (b, c) ilangatye elibuyisa amandla intambo yamandla ayifanelekanga yokubeka umbhobho xa ubeka emhlabeni xa ilangatye elidibanisayo lifuneka.
za-vv, za-vlv, zb-vv, zb-vlv, zc-vv, zc-vlv, i-PVC efakwe i-PVC ifakelwe (b, c) intambo yamandla e-flame-retardant ingafakwa kwi-Flame-retardant Indoors, iitonela kunye nemibhobho apho kufuneka khona.
i-za-vv22, za-vlv22, zb-vv22, zb-vlv22, zc-vv22, zc-vlv22, i-PVC yentsimbi yentsimbi exhobileyo i-PVC i-sheathed a (b, c) intambo yamandla e-retardant yamandla afanelekileyo yokubeka umhlaba xa idangatye iyafuneka ayilungelanga ukubekwa kwemibhobho.
wdza-yjy, wdza-yjly, wdzb-yjy, wdzb-yjly, wdzc-yjy, wdzc-yjly, umnqamlezo odityanisiweyo we-polyethylene i-polyolefin ifakelwe i-b (c, c) iintambo zombane ezinokutsha zingabekwa kwilangatye ngaphakathi, iitonela kunye nemibhobho apho kufuneka khona i-halogen kunye nomsi ophantsi.
I-polyethylene enqamlezileyo yentsimbi yentsimbi ene-armored polyolefin i-sheatshed a (b, c) iintambo zamandla ezinqabileyo ezinqabileyo zilungele ukubeka umhlaba xa i-flame-retardant, i-halogen-free kunye ne-low-smoke, kwaye ayifanelekanga ukubeka iipayipi. .
I-vv, vlv, ithusi (i-aluminium) engundoqo ye-PVC efakwe ngaphakathi kunye nePVC iintambo zombane ezifakwe ngaphakathi, iitonela kunye nemibhobho okanye kwizibiyeli zangaphandle, kwaye azikho phantsi koxinzelelo kunye nemikhosi yangaphandle
i-vy, vly, ithusi (i-aluminium) engundoqo ye-PVC i-insulated kunye ne-PE shehedhed power cable
I-vv22, i-vlv22, ityhubhu (i-aluminium) isiseko se-PVC esinezixhobo zentsimbi exhobileyo enezixhobo zombane ze-PVC ezibekwe ngaphakathi, iitonela, imisele yentambo kunye nomhlaba ongcwatyelwe ngqo, iintambo zinokumelana noxinzelelo kunye neminye imikhosi yangaphandle
vv23, vlv23, ubhedu (ialuminiyam) isiseko se-PVC esinezixhobo zentsimbi ekhuselweyo yamandla ombane we-PE
Amandla okusetyenziswa kwentambo ombane aphezulu
Le mveliso ilungele umbane olinganiswe nge-35kv nangaphantsi ukuhambisa umbane kunye nokuhanjiswa. Elona xesha liphezulu lobushushu bexesha lokusebenza komqhubi wentambo ngama-90 degrees, kwaye elonaqondo lobushushu liphezulu le-cable conductor alidluli kuma-250 degrees xa kujikeleziswa ixesha elifutshane (elona xesha lide alidluli kwi-5s).
1kv nangaphantsi ziintambo zombane eziphantsi; 1kv ~ 10kv ziintambo zombane eziphakathi; 10kv ~ 35kv ziintambo zombane eziphezulu; I-35 ~ 220kv ziintambo ze-UHV;
Intambo ye-UHV luhlobo lwentambo yamandla esele ivele kunye nophuhliso oluqhubekayo lwetekhnoloji yetheyibhile. Intambo ye-UHV isetyenziswa ngokubanzi njengeziko eliphambili kwiinkqubo ezinkulu zokuhambisa umbane. Yintambo enevolthi ephezulu enomxholo ophezulu wobuchwephesha kwaye isetyenziselwa ikakhulu ukuhambisa umbane omde.
Unobangela wokusilela kwentambo enevolthi ephezulu
Intambo ibhulorho phakathi kwezixhobo zokuhambisa umbane kunye nezixhobo zombane, kwaye idlala indima yokuhambisa amandla ombane. Isetyenziswa ngokubanzi, ke ukusilela kuhlala kwenzeka. Oku kulandelayo luhlalutyo olufutshane lwezinto ezibangela iingxaki eziqhelekileyo zeentambo zombane ophezulu. Ngokwezizathu zokungaphumeleli, zahlulwe zala macandelo alandelayo: izizathu zokuvelisa umenzi, izizathu zomgangatho wokwakha, iiyunithi zoyilo izizathu, ukonakaliswa kwamandla angaphandle kweendidi ezine.
Egqithileyo Ixesha eliQinisekayo lokuVavanya
Okulandelayo: Intambo yamandla 32
Intambo yokulawula kvvP2
Tsala intambo yeNtambo
Umgangatho we-A06,4th, iTianqin Building, No. 702 Isitalato i-Zhonghuabei, eCongtai Dis.